Accueil > Gazetin'ny nosy > Hetra: Tomban’ezaka sy fanatsarana ny fidiram-bolam-panjakana
Hetra: Tomban’ezaka sy fanatsarana ny fidiram-bolam-panjakana
Manao fivoriana lehibe mahakasika ny fidiran-ketra eto Magadasikara ny mpiasan’ny sampan-draharahan’ny hetra. tonga eto Antananarivo avokoa ireo miasa avy any amin’ny faritra sy ny faritany. Ao amin’ny toeram-pandraisam-bahiny Carlton Anosy no anaovana izany nanomboka omaly ka hatramin’ny androany faha 25 janoary 2018. Tomban’ezaka mahakasika ny taona 2017 sy fanatsara bebe kokoa ny fampidiran-ketra manomboka amin’ny taona 2018 ity. Notsipihina manokana amin’izany ny mahakasika ny hetra mifangaro (impôt synthétique) izay sokajy iray. Hatramin’ny 0 ariary ka hatramin’ny 100 tapitrisa ariary isan-taona no aloan’ny mpandoa hetra amin’izany.
Ny sokajy faharoa dia ny mpandoa hetra avy amin’ny vola azo (impôt sur les revenus) izay mihoatra ny 100 tapitrisa ariary. Izany dia hijerena ny olona izay mampidi-bola rehetra hatraty tsy ankanavaka aty andrenivohitra ka hatrany ambanivohitra lavitra any.
Noho izany dia tsy maintsy atao ny fanofanana ireo mpiasan’ny mpamory hetra mba hisian’ny fanatanterahana ny voalaza ny lalàna izay voarakitra amin’ny tetibolam-panjakana 2018 iny.
Voalaza fa hisy ny sampan-draharaha vaovao mahakasika ny “Service de ressource locale” na ny sampan-draharaha miandraikitra ny fampidiram-bola any ifotony. Ireo no hiandraikitra ny hetra trano, tany, ary ny fitrandrahana rehetra any amin’ny toerana rehetra any.
Adidin’ny olom-pirenena tsirairay ny mandoa hetra ary antoka ny fampandrosoana ny firenena izany.
Maro no tsy mandoa hetra ny olona mitondra firenena eto Madagasikara. Isan’izany ny olana sedrain’ingahy Ravalomanana Marc amin’izao fotoana izao. Hetra tao anatin’ny valo taona no tsy naloany ka isan’izany ny tany amin’ny entana tao amin’ny orinasa lehiba natsangany Magro sy ny Tiko. Tsy mbola nandoa vidin-jiro tamin’ny Jirama koa izy tamin’izany. Vola manapitrisa maro no tsy naloany. Mijery azy fotsiny ny sampan-draharahan’ny hetra fa tsy sahy manasazy azy akory. Toa miray tsikombakomba aminy koa aza ny fanjakana fa mijery sy manao fitaovana pôlitika izany fotsiny. Fantatra ny vahoaka izany ka isan’ny tsy mahatonga ny olona maro hazoto amin’ny fandoava-ketra.
Manaraka izany dia tsy hita marina no vokatra azon’ny Malagasy amin’ny fandoava-ketra fa mbola fahantrana lalina ihany no misy eto amin’ny firenena. Isan’ny olana lehibe amin’ity fitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina ity ny fanodinkodinana ny volam-panjakana ataon’ny mpitondra ambony sy ny mpiara-miasa aminy.
Na handoa hetra avy ny olona ka ratsy ny fitantanana izany dia ho zava-poana ny ezaka hataon’ny mpiasan’ny hetra izao.